Baadhitaan: Dhammaan-In-One PPC-kaaga iyo Xalka Bogga Soo-Degitaanka Ololaha | Martech Zone
Dhaqdhaqaaqa: Dhammaan-In-One PPC-kaaga iyo Xalka Bogga Soo Degitaanka Ololaha Xayeysiinta
Talaado, Nofeembar 3, 2020 Talaado, Nofeembar 3, 2020 Douglas Karr
Suuqgeye ahaan, udub dhexaadka dadaalkeenu wuxuu isku dayayaa inaan u nisbeyno iibka, suuqgeynta, iyo dadaallada xayeysiinta ee aan u qaadnay inaan u dhaqaaqno himiladeena safarka macaamiisha. Macaamiisha rajada lihi weligood ma raacayaan waddo nadiif ah iyada oo loo marayo beddelaad, in kastoo, iyadoon loo eegin sida khibradda leh ee cajiibka ah.
Marka ay timaado xayeysiinta, hase yeeshe, qiimaha helitaanku wuxuu noqon karaa mid aad qaali u ah… marka waxaan rajeyneynaa inaan xakameyno si aan u ilaalino una wanaajino natiijooyinka ololaheena. A bogga degista waxaa badanaa loo galiyaa tan. Waa kuwan 5 faa'iidooyin:
Faa'iidooyinka bogga Degista
Qaadashada - adoo ka fogeynaya bogagga degitaanka waddooyinka kale ee beddelashada, waxaan ka heli karnaa faham cad oo ku saabsan soo noqoshadayada maalgashiga xayeysiinta.
Dabeecadda - adoo xaddidaya ka-qaybgalka kheyraadka kale, waxaan yareyneynaa xulashooyinka iyo ficillada rajooyinkeennu qaadanayaan, hubinta inay u badan tahay inay beddelaan halkii ay ka daalacan lahaayeen.
halleeyo lillaahinimada - annaga oo naqshadeynayna bogag qurux badan, deg deg ah, oo fudud, waxaan kordhin doonnaa suurtagalnimada in soo booqdehu beddelo, iyadoon loo eegin aaladda.
Maareynta Lead - awoodda si fudud loo ansixiyo, loo kaydiyo, loo gudbiyo, loo maro, loona jawaabo tilmaamaha inta ay buuxinayaan foomamka diiwaangelinta.
Imtixaanka - adoo adeegsanaya barxad ka kooban hababka tijaabinta, waxaan geyn karnaa cinwaano kala duwan, nuxur ahaan, qaabab foomam ah, iyo naqshadeynno tirakoobka ku kordhinaya
Tusaale Bogga Soo Degitaanka
U fiirso qaar ka mid ah astaamaha muhiimka ah ee bogga degitaanka fudud ee hoose - hagitaan dhimis, cunsurro is-khilaafsan oo xoog leh, hal wicitaan-u-dhaqaaq, cinwaan, dulmar guud, iyo dhibcaha rasaasta driving dhammaantood ku kaxeynaya adeegsadaha inuu beddelo:
Barxadda Bogga Soo Degida ee Instapage
Waa kuwan hordhaca fiidiyowga iyo muuqaalka guud ee Barxadda bogga soo degida Instapage:
Sifooyinka Bogga Sagootida
Dhismaha Instapage ee sida buuxda loo habeyn karo wuxuu u saamaxayaa ganacsiyada inay abuuraan bogag soo degitaan oo saaxiibtinimo leh. Iyada oo la adeegsanayo tifaftirka qaybaha macnaha guud, in ka badan 5,000 nooc, iyo 33 milyan oo sawirro ah oo lala shaqeynayo, dhisaha bogga soo degitaanka Instapage wuxuu xanuunka ka qaadayaa soo saarista astaan, bogagga soo degitaanka saaxiibtinimada leh Astaamaha waxaa ka mid ah:
Qaabdhismeedyada Qaab-dhismeed ee ku saleysan Kiiska Warshadaha & Isticmaalka - 200 + si dhammaystiran loo qaabeyn karo oo loo habeyn karo qaab-dhismeedyo loogu talagalay in lagu kordhiyo beddelaaddaada.
Wadashaqeynta Bogga - Si toos ah ula shaqee asxaabtaada iyo macaamiisha waqtiga dhabta ah si loo hagaajiyo nidaamka dib u eegista naqshada. Samee boggagaaga la abuuro, dib loo eego, la daabaco, oo dhakhso loo beddelo.
Form dhise - Ku dar foomam la beddeli karo oo leh goobo fara badan, liisaska hoos-u-dhaca, ama badhannada raadiyaha dhawr guji oo keliya. Si fudud u aruurinta macluumaad dheeri ah rajadaada adoo u rogaya foomamka isku dhafan tillaabooyin badan. Yaree dhibcaha khilaafaadka oo u oggolow dadka isticmaala inay la macaamilaan magacaaga.
Maareynta Lead - Keydso, ka gudub, dhoofinta, ama dariiqyada loo maro Instapage ama isku dar oo u sii gudbi CRM-kaaga ama is-dhexgalka kale. Hesho emayl iyo ogeysiis dashboard markaad soo saareyso hoggaan cusub.
Farriimaha Xaqiijinta - Ka-habeyn farriinta xaqiijinta ee soo muuqata marka ay soo booqdaanyaashu foomkaaga buuxiyaan.
Mahadsanid & Bogagga Xaqiijinta - Ogeysii macaamiishaada cusub inay ogaadaan inaad qaddarinayso danahooda ka dib markay ku soo gudbiyaan macluumaadkooda foomka xulashada leh bogga mahadsanid.
Daabacaadda Hantida Dijital ah - Badbaadso naftaada tallaabo adoo dejinaya nidaam otomaatig ah oo alaab gaarsiinta ah. Dhowr guji waxaad ku hubin kartaa in markii hoggaankaagu doorto dalab, loo diyaariyey iyaga si deg deg ah loo soo dejiyo.
Dib u dhigista - Si dhakhso leh u dhis boqolaal bog oo shaqsi ahaaneed oo degitaan ah adoo isticmaalaya bogag shaqsiyadeed oo aad astaysto, keydin karto, dibna u isticmaali karto. Ka xusho xulasho tusaalooyin hore loo sii qorsheeyay, sida madaxyada, cagaha, markhaatiyada, iyo in ka badan, ama ka sameyso aagag u gaar ah oo aad xoqdo.
Widgets - Si dadaal la'aan ah ugu dar lakabyo waxqabad bogagga degistaada oo leh wijlado.
Xayiraadaha Mobilada - Abuur bogag deg deg ah oo jawaab celiya oo hal guji ah. Dhexdhexaadinta dheeraadka ah, waad ku qarin kartaa boggaga bogagga muuqaalka moobiilka si aad u abuurto khibrad dhiraandhirin ah oo aad u fiican. Kordhin beddelka adoo u abuuraya khibrada moobiilka ugu habboon ee booqdayaashaada, adigoon isticmaalin horumariyaha.
Blocks Caalamka - Maareynta tusaalooyinka caalamiga ah dadaal la'aan si loo hubiyo in dhammaan bogagga ay yihiin kuwo u hoggaansamaya sumadda. Dhis caado, on-brand Instablocks sida cinwaanka, hoosta, ama baloogyada alaabada si aad ugu isticmaasho boqolaal ama kumanaan bog. Ka dib, wax ka beddel baloog hal mar oo isbeddeladaadu ka muuqdaan bog kasta oo xayndaabku u muuqdo.
Ka bax Foomka Nuqulada Foomamka & Foomamka Qabashada Lead - Abuur pop-up la-beddeli karo oo ku saleysan kiciyeyaal gaar ah leh OptinMonster, Bixiyaha hormuudka u ah ka bixitaanka-ujeedka softiweerka soo-baxa, si loo kordhiyo sicirka beddelaadda bogagga degitaankaaga
Waraaqaha Gaarka ah (Google & Typekit) - Xarafyada gaarka ahi waxay awood kuu siinayaan inaad soo bandhigto aqoonsigaaga astaantaada. Instapage waa madal kaliya ee bixisa helitaanka 5,000 + premium Webfonts ku dhowaad 100 jeer xulashooyinka font ka badan software kasta oo bogga degitaanka ee suuqa.
Maamulaha Hantida Sawirka - Ku dar oo wax ka beddel sawirradaada aaladda naqshadeynta bogga soo degitaanka Instapage si aad si gaar ah shakhsiyeyn ugu dallacsiiso ama u bixiso.
Tijaabinta dhabta ah ee Server-side A / B Split Test - Ku hagaaji bogaggaaga degitaanka si aad ugu beddelato awoodaha tijaabada A / B labada boggeena caadiga ah ee degitaanka iyo bogagga AMP. Lasoco habdhaqanka booqdaha, kala duwanaanshaha tijaabinta walxaha cusub, qaabeynta, iyo / ama naqshadaha, oo kordhi heerarka aad u beddeleyso.
Bogagga Soo Degitaanka AMP - Dhis boggaga mobilada ee si dhakhso leh u soo raaca, samee waayo-aragnimo dhiraandhirinta ka wanaagsan, oo ku beddelo beddelaad badan bogagga degitaanka Google AMP-ku shaqeeya. Instapage wuxuu leeyahay dhisaha kaliya ee kuu ogolaanaya inaad sameysid iyo A / B tijaabinta boggaga adigoo adeegsanaya qaab dhismeedka AMP, horumarna uma baahna.
Template Upload & Download - Si dhakhso leh oo fudud ugala soo bixi sheylooyinka ThemeForest (ama wax ka abuuro wax aad xoqdo). Soo dejiso si aad ula wadaagto nashqadaha bogga degitaanka adduunka.
Dulmarka Ilaalinta - In kor loo qaado wax soosaarka isla markaana la jaangooyo habsami u socodka shaqada iyadoo laga hor istaagayo isticmaaleyaasha in ay midba midka kale shaqadiisa qoro.
Dejinta - Soo celi noocyadii hore ee bogga soo degitaanka ee loogu talagalay nabada maskaxda markii la abuurayo, qaabeynta, ama tifaftirka.
Heatmaps - Heatmaps-ku waxay bixiyaan aragtiyo faahfaahsan oo ku saabsan sida booqdayaashaadu ula falgalaan bogagga degitaankaaga. Tani waxay sifiican kuu ogeysiineysaa waxa bogga ka kooban imtixaanka A / B.
Falanqaynta Beddelka - Si toos ah ula dhexgal Google AdWords iyo Falanqaynta sifeyn sahlan iyo sameynta waqtiga-kharashka-booqdaha iyo jaan-gooyooyinka qiime-u-eegista midig oo ka muuqda barxadda Instapage. Kadibna, u gudbi metadata horseedka ah CRM ama nidaamka otomaatigga suuqgeynta.
Ku-Raadinta Pixel Tracking - U adeegso raadinta 'pixel tracking' si aad ula socoto isbeddelada dibedda ama dib u habeynta martida ee aan u rogin boggaaga degitaanka.
Bog kooxeyn loogu talagalay Maareynta Ololaha - Instapage wuxuu fududeeyay maareynta ololaha sidaa darteed suuqleyda PPC waxay si deg deg ah ugu dhisi karaan kooxo xayeysiis ah kanaalka xayeysiiska kala duwan, alaabada, astaamaha, iyo tirada dadka.
Warbixinnada waqtiga-dhabta ah - Hel xogta waqtiga-dhabta ah, wakhti kasta, dhammaan qalabkaaga, wakhti kasta.
waxkabadalka - Si dhakhso leh u abuur hal-abuurnimo 1: 1 xayeysiis-ka-bog-guji waayo-aragnimada bogga soo-dejinta ee dhagaystayaal kasta oo leh Maareeyaha Khibradda. Ku raaxee macaamiishaada khibradaha bogga ee kaa caawin doona inaad sare u qaaddo beddelaadyada, aad u kordhiso xayeysiinta dhijitaalka ah ROI, iyo inaad yareyso qiimaha iibsiga.
Isdhexgalka - Si fudud ugu dhex dar Instapage-ka maanta sida ugu badan loo isticmaalo, xayeysiinta dhinac saddexaad, falanqaynta, CRM, suuqgeynta iimaylka, iyo istaraatiijiyadaha otomatiga ee suuqgeynta.
Ku Bilaw Instapage
Astaamaha Ka Soo Degida Hay'adda Soo Degitaanka Kujira
Lacag Bixinta Taabasho (PPC) iyo wakaaladaha xayeysiinta, Instapage waa xalka Wakaaladda ugu fiican sidoo kale. Tilmaamaha hay'adaha waxaa ka mid ah:
Xisaabaadka Master - Si fudud u maaree xisaabaadka macaamiisha badan adoo ka beddelaya koontooyinkaaga adigoon u baahnayn akoonno kala duwan. Arag liiska xisaabaadka aad marin u leedahay, u wareeji koontada aad rabto inaad ka shaqeyso, oo u fiirso koontada / milkiilaha macluumaadka koontada aad hadda ku dhexjirto hal is-dhexgal midaysan.
Goobaha Shaqada ee Gaarka ah ee Macaamiisha - Abaabul goobaha shaqada ee kooxda, si wanaagsan u maareeyaan isdhexgalka kooxda, iyo ilaalinta asturnaanta macmiilka adigoo ku martiqaadaya xubnaha kooxda goobo shaqo oo gaar ah. Waxaad si dhakhso leh ugu oggolaan kartaa helitaanka bogagga daabacaadda goobaha shaqooyinka gaarka ah, maareyn kartaa iskudhafka caadada ah iyo, si ammaan ah ugu daabacan CMS dibedda nidaamka calaamadda.
Ogolaanshaha Xubnaha Kooxda - La wadaagida shaqadaada koox ama macaamiil macnaheedu maahan inaad gudbiso macluumaadkaaga soo galida. Instapage-ka, waxaad si fudud ugu bixin kartaa marin-u-akhrin-keliya xubnaha kooxda saxda ah ama daneeyayaasha, bogagga degitaanka saxda ah.
Daabacaadda Goobaha Aan Xaddidnayn - Si ka duwan barnaamijyada kale ee bogga soo degaya, Instapage wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku daabacdo bogag badan oo gooniya oo u gaar ah nidaamyada maareynta maaddooyinka badan.
Codso Demo Demo
Shaacinta: Waxaan u adeegsanayaa xiriiriyeyaasheeda xiriirka Saabuunta, Dulucda, Iyo OptinMonster halkan.
Tags: xayeysiiska bogga soo degayamadal bogga soo degida wakaaladdabogga soo degitaanka ololahagorfaynta beddelkaqaab dhismegoogle adwordsSaabuuntadhexgalkapage degteydeg deg bogga dhisetusaalooyinka bogga degistafoomamka bogga degitaankahagaajinta bogga degistabogga degistaqabashada hogaankafoomamka qabashada macdanta "lead"boogahappc
GTranslate: Nuqul Tarjumaad WordPress ah oo Isticmaalaya Google Translate